China Hexagon rotary hard barbell bar fekitori uye vatengesi |Yunlingyu
zvinhu Simbi yakasimba
50 * 50MM Carbon simbi pombi
uremu Net uremu: 26kg
uremu hwegori: 27kg
color dema/dema uye orenji
zvimwe kukora kwemadziro: 3mm
chepakati furemu mubato: 710mm
3 mubato dhayamita:25mm/38mm/50mm
Galvanized process, yezvakatipoteredza haina kunaka, kuramba ngura uye ngura, yakashongedzerwa nemabarbell plates e50 mm aperture.
Nzvimbo yekumisikidza uye hoop yekuchengetedza yakabatanidzwa, uye yakasimba.
Super yakanaka knurled isina-kutsvedza mubato, inogona kushandisa simba riri nani.
Target Exercise site : brachialis muscle.Anogonawo kushandisa brachioradialis brachialis biceps muscle.
Zvakakosha kurovedza muviri
1. kumira, tsoka papfudzi - dzakaparadzana, bata simbi yedenderedzwa yakatwasuka yakabatirira nemaoko ese, simudza masimbi.Donhedza zvakasununguka nebarbell pamberi pemuviri wako, maoko ekumusoro pedyo nedivi remuviri.
2. Mhepo yakafuridzirwa, pfugama zvakasimba kumusoro, brachialis distension ye lateral biceps inogona kunzwika, iyo yepamusoro-soro yepinacle contraction, uye ubatisise kwechinguva, uye wozoidzorera zvishoma nezvishoma.Ruoko rwakatambanudzwa zvakakwana panzvimbo yakaderera.
3. Mushure mekudzorera kune yekutanga, dzokorora.Nekuti brachialis inononoka tsandanyama fiber ichienzaniswa neiyo biceps, iyo inononoka kufamba, zviri nani.
hunhu hwakatanhamara, uye vanhu vazhinji vanoziva maitiro ayo.Ichakubatsira iwe paunodhonza zvakasimba, kuderedza mutoro uri pamusoro pemusana, uchikumanikidza kushandisa simba rako rezasi rezasi kuti upedze chiito.
Saka, varairidzi vese vanodzidzisa kudhonza kwakaoma, kana iwe unotarisa firimu rekuratidzira zvakanyatsonaka, mumusimboti, iyo barbell haifambi kure nemuviri.Kuswedera kwaunenge uri kumakumbo ako uye kumusoro uye pasi, zviri nani, kuchengetedza nzvimbo yegiravhiti uye kuderedza njodzi yekukuvara kwemusana.
Zvakapfuura: denderedzwa hex barbell bar
Zvinotevera: Kupeta furemu squat rack